Buy PRIENT AUTOMATIC WATCH (295,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
PRIENT AUTOMATIC WATCH
ရောင်းချသူ: Lin Lin
ဦးတဲ့သူရမည်.. အသစ်ဈေး,$599 ရှိတယ် ရောင်းပေးမဲ့ဈေးကြည့်လိုက်ပါ
ORIENT AUTOMATIC WATCH.
Power reserve ပါသော Model အမြင့်နာရီလေးပါ.
စတိုင်လေးအလွန်လှပြီး ခန်သော နာရီလေးပါ.
Automatic Brand နာရီလေးတစ်လုံ ယခုလိုဈေးနဲ့ရဖို့မလွယ်ပါဘူး ,အမှတ်တရအနေနဲ့ရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
ORIENT caliber 46R41 Made in Japan� movement
21 jewels �21600/hour vibrations
Power reserve indicator located at 12 o'clock position
Case material: Stainless steel�
Stainless steel� bezel
Crystal exhibition back (see-through case back)
Case shape: Round�
�Diameter: 44.00 mm X 13 mm thick
Water resistance: 100 meters�
Stainless steel bracelet with folding clasp�
အသစ်ဈေး .$599 ရှိပါတယ်..
အမှတ် ၁၉၅/၁၉၇, ပထမထပ် ,၂စီ လမ်း၃၀အပေါ်လမ်း
အနော်ရထာလမ်းမှဝင်ရင်ပိုနီးပြီး,ရွှေထူးမိုးပြန်ခေါက်ဆွဲကြော်ဆိုင်ဘေးလမ်း,ဆိုင်အောက်မှာချိုငြိမ်း စက္ကူဖြတ် လုပ်ငန် နဲ့ ဘေးလှေကားမှတက်ခဲ့ပါ.သံဗန်းတံခါးရှိသောအခန်းပါခဗျာ ပထမထပ်,
*Swiss Made & Japan Made Used*
နာရီဆိုင် မှ Brand Watch’s Used နာရီများကိုအာမခံ ဘယ်လိုပေးလဲ?
၇ရက် အတွင်းဝယ်ယူထားသောနာရီများကိုအခြားကြိုက်နှစ်သက်သော နာရီလဲ ခြင်ပါက ၁၅% ရှုံးပြီး လဲပေးပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှဝယ်ယူထားသောနာရီများကို ၁ကြိမ်း ဓါတ်ခဲ ပစ္စည်းဖိုး လက်ခ အခမဲ့ လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.
ဝယ်ယူထားသောမည်သည့်နာရီမဆို ဝယ်ယူထားတဲ့အတိုင်းအနာအစာမရှိအကောင်းတိုင်းရှိခဲ့ပါက အချိန် ကာလ မည်မျှကြာပါစေ ၃၀% အရှုံး အခြားနာရီနဲ့ လဲယူနိုင်ပါသည်.
(၁လ)အတွင်းError ဖြစ်ပေါ်လာပါက ပစ္စည်းဖိုးလက်ခ အခမဲ့ ပြန်လဲပြုပြင်ပေးပါမည်...
Leather,ကြိုးနာရီများကို ဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်း,ကြိုးပျက်,ကြိုးအနာအစာဖြစ်ခဲ့ပါက,Leatherကြိုးအကောင်းစားအသစ်တစ်ချောင်း(မေတ္တာလက်ဆောင်ပစ္စည်းဖိုးလက်ခ )အခမဲ့လဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဝယ်ယူပြီးသော နာရီများကို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မှ(လုံးဝ)လုံးဝ ငွေပြန်မအမ်းပါခဗျာ....
၁၅ပဲရည် လက်ဝါးကပ်တိုင် စက်ဖြတ်ဆ...
အမည်: PRIENT AUTOMATIC WATCH